လဂွန်းအိန် | အရိုးရှင်းဆုံးအမှန်တရားအတွက် | Page 3
Posted by lagoonaing under ပုံပြင် | Tags: ပုံပြင် |
ပုံပြင်အဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ကြားဖူးတဲ့လူတွေရှိသလို မကြားဖူးတဲ့လူတွေအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟိုးရှေးရှေ… ရှေးရှေ တုန်းကပေါ့ … ဘုရင့်နေပြည်တော်ကြီးနဲ့ မနီးမဝေး ရွာတစ်ရွာမှာ .. ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိသတဲ့။
ကောင်လေးကပျင်းတာကလွဲရင် တစ်ခြားဘာမှ အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးတဲ့။ (လဂွန်းအိန် လိုပဲနေမှာ)
တစ်နေ့ ကောင်လေးက ဗေဒင်ဆရာဆီသွားပြီး၊ဗေဒင်လေးဘာလေးမေးတာပေါ့။ ဘာလား၊ညာလား နဲ့ နေမှာပေါ့။
ဒီတော့ ဗေဒင်ဆရာကပြောတယ်.. “ကောင်လေး .. မင်းမစိုးရိမ်နဲ့ .. မင်းဘ၀ကောင်းစားဦးမယ်။
ကောင်လေးကလဲ ပြန်မေးတာပေါ့ ..” သေချာလားဆြာ ..” ပေါ့ ။
ဆြာကလဲ ..” သေချာပါတယ်”ပေါ့ ။
ဒီတော့ ကောင်လေးလဲ .. နဂိုကမှ ပျင်းတဲ့ အခံလေးကရှိတော့ သူ့ကိုသူ မင်းဖြစ်မယ့်ကောင်ဆိုပြီးဘာမှ မလုပ်ဘဲ၊
တစ်နေ့တစ်နေ့ နဲ့ တစ်ရွေ့ရွေ့ အချိန်တွေ ကုန်လာလိုက်တာ… နောက်ဆုံး အပြင်းအထန်ဖျားနာပြီး ပြုစုမယ့် သူမရှိလို့
လမ်းဘေးမှာ လေလွင့်နေရင်း၊ သူသေမယ့် အချိန်ကို မျှော်နေတုန်းမှာပဲ …
သူတို့ တိုင်းပြည်က ဘုရင်ကြီး တိုင်းခန်းလှည့်တာနဲ့ကြုံပါတယ်တဲ့..။
ဒီတော့ ကြင်နာတတ်တဲ့ဘုရင်ကြီးက သူလမ်းဘေးမှာလဲ နေတာတွေ့ပြီး သနားစိတ်ဝင်လာတယ်တဲ့။
သူ့အမှုးအမတ်တွေ နဲ့ ကြည့်ရှု ခိုင်းတော့ .. မကြာခင်သေမယ့် လူမမာ ဆိုတာကိုလဲသိရော..
ဘုရင်ကြီးက အရမ်းသနားသွားပြီး သူ့ ကိုယ်ရံတော်တွေ၊အမတ်တွေ ကို အမိန့်ပေးတယ်..
“ဟေ့ .. ဒီ မကြာခင် .. ကွယ်လွန်မယ့် သူကို .. နောက်ဆုံး သက်သက်သာသာ နဲ့ဘ၀ကူးရအောင်
ငါကိုယ်တော်ရဲ့ ထီးဖြူနဲ့ မိုးထားပေးလိုက်စမ်း မောင်မင်းများ .. “ဆိုပြီး အမိန့်ပေးတယ်.. တဲ့ .. ။
ဒီလိုနဲ့ မင်းမှုထမ်းတွေ လည်း အမိန့်အတိုင်း ထီးဖြူကို ကောင်လေး(ကောင်ကြီးဖြစ်နေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်)
ပေါ်မှာ မိုးပေး၊ ဘုရင်ကြီးလည်းတိုင်းခန်းဆက်လှည့်သွား.. နောက်ကောင်လေးလည်း အဲဒီနေရာမှာတင် သေသွား..
ဒီလိုနဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးလဲ ပြီးရောဆိုပါတော့ ဗျာ။
ဒီပုံပြင်လေးက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စဉ်းစားစရာလေးတော့ ပေးနိုင်မှာပါ..။
Posted by lagoonaing under ဟာသ | Tags: ဟာသ |
တစ်နေ့က အသိတစ်ယောက် အဖမ်းခံရတယ်ကြားလို့ သတင်းသွားမေးတာ။
ဟိုရောက်တော့ မေးတာပေါ့။ ဘာမှုနဲ့လဲ..ဘယ်တော့လွတ်မှာလဲပေါ့။
သူ့အကျင့် ကိုက နဲနဲ ပြောရဲဆိုရဲ၊စိတ်ကလဲမြန်ဆိုတော့ လဲ ကိုယ်ကတော့ ပိုစိုးရိမ်တာပေါ့ဗျာ။
ရှင်တို့သူငယ်ချင်းကိုက ပါးစပ်သရမ်းတာ။ သူငြိမ်ငြိမ်နေရင်ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။
ခုဟာက ဘာမှမဟုတ်ပဲပါသွားတာ။ ဖြစ်ပုံကဒီလို .. ဘေးအိမ်က မီးကြိုးပျက်ကျပြီးမီးမလာဘူး။
ကျန်တဲ့အိမ်တွေကလာတယ်။ အဲဒါ ကို သူတို့က မီးသမားခေါ်ပြင်တော့ ကျုပ်တို့အိမ်က
မီးကြိုးပါပြုတ် ပြီးမီးမလာတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဟိုကမှ တိုင်ပေါ်မှာ လုပ်လို့ပြင်လို့မပြီးသေးတာ။
အဲဒါကိုရှင်တို့လူက အငြိမ်မနေဘဲ ဓါတ်တိုင်အောက်သွား၊ပြီးတော့ ပွစိ ၊ ပွစိ နဲ့ သွားပြောတာ။
အဲဒါ .. အနားမှာထောက်လှမ်းရေးက ရှိနေတော့ ခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုပြီး ဖမ်းသွားရောလား။
ကျွန်တော်တို့ကလဲ သူဘာများသွားပြောမိလို့လဲ အမရယ်လို့ပေးတော့
ဘာမှ မဟုတ်ဘူး .. သူပြောတာက “ဒီကောင်တက်လုပ်မှဘဲပျက်တော့တယ်” တဲ့..။ 😀
မြန်မာတို့လွတ်လပ်ရေးရခါနီး..ဘုရင်ခံဆာဟူးဘတ်ရန့် နဲ့ ဦးနု တို့ မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ အတွက်ဆွေးနွေးကြတယ်။
ရန့်။ ။ မစ်စတာနု ၊ ခင်များတို့ ဗမာတွေ ဘယ်နေ့ လွတ်လပ်ရေး ယူကြမှာလဲ။ကျုပ်က လဲဘိလပ်ကိုပြန်ချင်လှပြီ၊မြန်မြန်သာယူတော့ဗျာ။
နု။ ။ကျွန်တော်တို့ ဇန်န၀ါရီ (၄) ရက်နေ့ ၊နံနက် (၄) နာရီ ၊မိနစ် (၂၀) မှာယူမယ်ဗျာ။
ရန့်။ ။အင်း….နေ့ရက် ကတော့ ပြသနာမရှိပါဘူး ၊ ဒါပေမယ့် မစ်စတာနုရယ်… အချိန်က သိပ်မစောလွန်းနေဘူးလားဗျာ..။
နု။ ။မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့က ဗေဒင်တွေ၊နက္ခတွေတွက်ပြီးပြီ။အဲဒီနေ့၊အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်တို့ အတွက်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။
ရန့်။ ။အင်း…. ပြီးတာဘဲလေဗျာ ။ ကျွန်တော်က ခင်များတို့အတွက်ပြောတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ပြသနာမရှိပါဘူး။တစ်ရက်တည်းပဲဟာ..။
ဒါပေမယ့် ခင်များတို့ကတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အစောကြီးထကြပေဦးပေါ့ဗျာ…။
မှတ်ချက်။ ။မိုးမလင်းသေးသော အချိန်တွင် လွတ်လပ်ရေးသွားယူမိသောကြောင့်လားမသိ၊
အမေ (သို့) ပျံသန်းလွတ်လပ်နေသော နှလုံးသားအစုံ
Posted by lagoonaing under ကဗျာ | Tags: ကဗျာ |
မုန်တိုင်းဒဏ်ခံနေရတဲ့ သားတို့အတွက် အမေလိုတယ်၊
အမေနဲ့သားတို့တစ်တွေ တောင်ပံခတ် ပျံသန်းဦးမယ့်ရက်တွေ၊
ဟိုး …. မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းဆီက လွပ်လပ်မှုတွေ ဆီဦးတည်လို့ပျံမယ်။
နွေးထွေးခြင်းတွေနဲ့ နေရောင်ခြည်ကို ပွေ့ယူနိုင်တဲ့
အတောင်ပံတွေနဲ့ အားပေးပါဦး .. အမေရယ် ။
ရှင်သန်ခွင့်ကို ပေးမယ့် မေတ္တာတရားတွေနဲ့
အိပ်မက်တွေကို အသက်သွင်းပါဦးလား အမေရယ် ။
ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ အဲဒီအိမ်မက်တွေကြား
နာဂစ် ရယ် ….. ခုတော့ မင်းကြောင့်
ကလေးတွေရဲ့ အနာဂတ် မလှပတော့ဘူး
လူတွေရဲ့ မျှော်လင့်ခြင်းတွေ ဆုံးပါးခဲ့ရပြီ။
မင်းဟာ နာမည် လှသလောက်
ဒါပေမယ့် မင်းသိထားဖို့က နာဂစ် ရယ်
ဒို့ အိမ်မက်တွေကို ဆက်မွေးဖွားစေဦးမယ်။
ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလဒ်နဲ့ ရှင်သန်ခဲ့တာပါ။
ဒို့နာရင် ဒို့အချင်းချင်း ကုကြမယ်။
အပြန်အလှန်အားဖြင့် အိမ်မက်တွေ မျှဝေမယ်။